Aggaammii(Miidhaa) Saayiberii haala kamiin qolachuu dandeenya(How to protect Online Cyber Attack) - OROMO ICT
Aggaammii(Miidhaa) Saayiberii haala kamiin qolachuu dandeenya(How to protect Online Cyber Attack)
October 10, 2017 ICT Tutorial, Odeeffannoo, Technologycyber attack, miidhaa SaayibariiAbdisa Bencha Jara
Addunyaan amma keessa jiraachaa jirru yeroo icciitenyi saayiberii(Cyber Security), Balaa saayibarii(Cyber Crime) jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti baratamaa ta’uu bira darbee, jireenya nama dhuunfaafi dhaabbatoota adda addaa keessatti icciitii isaanii hatuufi saamuudhaan ogeeyyiin koompitaraa kasaaraa guddaa geessisaa kan jiraniifi haalichi yeroo dhaa gara yerotti baldhinaan dabalaa deemuusaa ragaaleen heddu ni ibsa.
Balaa saayiberii(Cyber Crime) kana ofirraa qolachuuf tartiibota murteessaa jennu armaan gaditti dhiyeessinee jirra. Tartiiba kana hordofaa:
Jecha Darbii[password] keenya cimsinee fayyadamuu qabna, keessaahuu Gaalee Darbii[Passphrase] fayyadamuu qabna.
Yeroo Jecha Darbii(Password) tokko banannu, Akkas Seera Jecha darbiitti Ulaagaan jechi darbii(password) tokko guutuu qabu keessaa muraasni:
Kuusaa ykn walitti qabama Qubee a,b,c…z, Lakkoofsas ittidabaluu, Mallattoolee akka !@#$^&*? fi kkf itti dabaluudhaan yoo uumanne, namni biroo tilmaamus ta’ee yaaliin argachuu hin danda’u
Maqaa keessan, Maqaa Jaalallee keessanii/teessanii ykn Maatii keessaniifi Lakkoofsa bilbilaa tasuma hin fayyadaminaa.
Icciitii eeggachuuf Xaxaa gootanii ofii keessaniiyyuu yeroo biraa yaadachuuf kan isin rakkisu hin godhinaa, yaadannoo dhuunfaa irratti qabadhaa iddoo namni hin argine dhoksaa ol kaayaa.
koompitara ykn Mobile dhuunfaa keessanii kan yeroo hunda isin qofti fayyadamtan yoo hin taane, Jecha Darbii(Password) keessan akka yaadatu hin godhinaa. #DONOTSave jedhaa yeroo jalqaba, seentan.
Koompitara keenya Eegumsa qaamaafi, Moosajii akka Dallaa Cimdaa(Firewall)dhaan hayyisuu nu barbaachisa(Securing our computers phyically and by Activating Fire wall) .
Dallaan Cimdaa akkuma maqaan isaa ibsutti kan hojjatuufi aggaammii koompitara keenya fageenya irraa itti aggaamamu qolachuuf gahee olaanaa kan qabuudha. Dallaa Cimaa kana koompitara keenya irratti kakaasuu(activate) gochuu hin irraanfatinaa. Dallaan cimdaa kaka’aan bifa suuraa irraa muldhatu kana qaba.
Farra Qinqanii(Anti-virus), Mosdhaa(Adware, malware and spyware) ka’aa(Active) gochuu
Kunimmoo Qinqaanii(virus)fi sagantaalee(Programs) adda addaa kan beekkumasa keenya malee koomputara keenya irratti fe’amuu malu nurraa ittisuu irra darbee, yoo qaamni qajeelloon koomputara keenya hordofee miidhuu barbaadee waa nutti erges nurraa ittisuuf gahee olaanaa qaba.
Akkasumas Moosajiilee adda addaa(Softwares) koompitara keenya irratti yoo feenu cal jennee osoo hin dubbisin itti fufi, itti fufi(Next, next..) ajaja jedhu cuqaasuu irraa ofeeguufii, sirnaan dubbifnee itti fufufii dhumarratti raawwachuufis seeraan dubbifnee mirkaneessuu(confirm) gochuutu nurraa eegama.
Hub: Qinqaniin uumama isaatiin #Saffisaafi amala #Maxxannee waan qabuufi, wanta barbaadeefi iddoo barbaadetti maxxanuuf akka tolutti yaadamee kan hojjatameedha. Kanaafuu, balaa haala kanaan dhufu dandamachuuf mi’a keenya too’achuutu nurraa eegama, Koompitara yoo ta’e, #FarraQinqanii haaromsuu(updating Anti-virus),
Deetaa Dhuunfaa keessan kan icciitenyi isaa hin eegamne tasuma Marsaalee akka dropbox, google drive fi marsaalee hawaasaa biroorratti gadi dhiisuu irraa of eeguu qabdu(Never Upload your unencrypted personal data to google drive, dropbox and other social sharing sites).
Malootni salphaan daqiiqaa muraasa keessatti deetaa keessan icciitessuu(encrypt) gochuuf oolan kannen akka AES-256 bits encryption.but fayyadamuun daataa keessan akka hin hatamneef kan maloota isin gargaaru waan ta’eef maloota akkasiitiin fayyamuu qabna. Sababa kanaaf Dhaabbanni gurguddoon addunyaa heddu deetaan isaanii jalaa hatameera, kisaaraafis saaxilameera.
Akkasumas, Bitlocker fayyadamnee Kuusaa koompitara keenyaa ‘Hard Disk drive’ illee eeggachuu dandeenya.
Qindaa’ina Marsaalee hawaasaa keenya kanneen yeroo yerotti too’achuu qabna.
Marsaaleen hawaasa nuti fayyadamnu kanneen akka Facebook, Twitter, YouTube, Google+ irratti Fuulgocha(profile) fi Qindaa’ina(Settings) ofeeggannoo cimaa gochuutu nu barbaachisa. Odeeffannoo dhuunfaa ofii keessanii qofa akka ilaaluu dandeessan(only me) isa jedhurra gochuu qabdu.
Odeeffannoo dhuunfaaa keessanii kanneen hin barbaachifnefi Suukannaawaa(Personal sentitive information) ta’an marsaalee hawaasaa irratti dhoobuu ykn hiruu dhiisuun gaaridha. Yeroo takka interneeta irra keenyaan hin badu waan ta’eef ofeeggannoo guddaa gochuun barbaachissadha.
Ergaalee adda addaa, keessattuu ergaa ergaalee dookumatiin biroo itti qabateen(emails with attached documents) karaa teessoo Ergaatiin namoota nuti hin beeknerraa nuuf ergamu(Different Email from different unknown source) dubbisuu dhiisuu, keessattuu dookumantii itti qabate sana(attached document) banuufi buusuu hin qabnu.
Cimdaa Interneeta Haadi-Maleessa(WI-FI) banaa ta’e ykn Jecha darbiitiin hin cufamin yoo argitan, osoo maalummaa isaa hin beekin, osoo kan eenyuu akka ta’e hin beekin ykn sababa banaa dhiifameef madda qabatamaa irraa adda hin baafatin hin fayyadaminaa. Yeroo isin cimdaa(network) banaa sana fayyadamaa jirtan sana bilbilli ykn koompitarri isin ittiin fayyadamaa jirtaniin sunis akkasuma daandii banaa kana keessa seena waan ta’eef abbaan barbaade ykn namni biraa cimdaa sana fayyadamaa jiru icciitiis ta’ee deetaa bilbila keessan keessa jiru salphamatti ilaaluu qofa osoo hin taane yoo fedhe garagalfachuu ykn balleessuus danda’a waan ta’eef.
Olbaatuu(pop-up), Ooftuu naqaa(Download drive) yoo interneeta fayyadamnu arginu irraa of eeggachuu.
Yeroo interneeta fayyadamnu olbaatuulee adda addaa fi ooftuun naqaa heddu ni argina. isaanis Mosdhaa(adware, malware) fikkf ta’uu waan danda’aniif akkasumas amala maxxannee kan qabaniifi salphatti koompitara keenyatti qabachuuf carraa waan qabaniif ofeeggannoo nu barbaachisu gochuu qabna.
Yeroo moosajii(software) tokko fkn 2.1MB yoo download goonu, erga download goone boota deetaan sun sirrii ta’uufi qabiyyee eergame qabaachuu adda baafachuu qabna.
Marsariitii keenya ykn Marsaa fayyadamnu eertuu https://(secured) ta’uu mirkaneeffachuudha.
Marsaan eertuu(https) dhaan eegalu, ciminni icciitenya isaa kan eertuu(http) qabu caalaa cimaafi amanamaa waan ta’eef xiyyeeffannoo gochuu qabna. Kana jechuun deetaa eertuu(https) irratti argitan hunda amanaa jechuu miti.
Tasa yoo Marsariitiin ykn Deetaan keessan Hatame immoo.
Kanneen armaan olitti eerre ofeeggannoo isin dursitanii gochuu qabdaniidha. Garuu osoma ofeeggannoo kana gochaa jirtan ykn osoo hin godhin tasa miidhaan ykn Aggaammiin Saayiberii(Cyber) Attack yoo isin mudate immoo, Hin rifatinaa. Kun addunyaa teekinoolojiin guddachaa deemaa jirtu keessatti akkuma teekinoolojiin guddachaa dhufuun ogeeyyiin koompitaraa Aggaammii Saayiberii raawwataa jiranis hedduumachaa dhufaa jiru waan ta’eef aggaammiin kun isin qofarratti kan raawwatame akka hin taane yaadadhaa.
Sana booda hoo maaltu itti aana, gaaffii jedhuuf: Yoo Ogummaa qabaattan, Eenyuun, eessarraayi ykn akkamitti isa jedhu faana dhahuu qabdu.(Tracking). Yoo Ogummaa hangasii hin qabdan ta’e Ogeessa isin gargaaruu danda’u qunnamuu isin barbaachisa.
Maloota armaan olii kanneen hojiirra yoo oolchitanis, Ammaayyuu Deetaan dhuunfaa keessanii gaaddisa jala jiraachuu mirkaneeffadhaa.
Maloota kanneen hojiirra oolchitanii osoo jirtanuu, yeroo hunda odeeffannoon dhuunfaa keessan keessattuu kanneen akka Kaardii Liqaa(Credit Card, Bank Statement, …) fi kkf too’annoo keessa jala jiraachuu mirkaneeffachuun barbaachisaadha.
OROMO ICT – Oromo Technology Center
← Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(Disadvantage of having SMART PHONE) geechisu keechaa	#Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamuuf Maloota kana hordofaa →
Total Hits : 514610